जापानी सुधारको बारेमा(ネパール語) - 日本語添削本舗－学術・ビジネス文書添削
/ 最終更新日時 : japanese ネパール語
जापानी सुधार होन्पो भनेको के हो?
थर्ड वे जापान कम्पनी लिमिटेड　वाट　संचालित “जापानी सुधार होन्पो” ले प्राय: विदेशीहरूको लागि जापानी सुधार गर्दछ।
हामी, जापानमा एकेडेमीक कागजात र व्यापारिक कागजात, लेख्नेहरु को लागी सुफद मुल्यमा जापानी सुधार सेवा उपलब्ध गराउछौ ।
हाम्रो उच्च गुणयुक्त जापानी प्रूफरीडिंगको साथ, हामी हाम्रा ग्राहकहरूको जापानमा सफलताको लागि भरपर्दो समर्थन प्रदान गर्ने गर्दछौं।.
विशेष रूपमा, हामीसँग विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, स्नातक विद्यार्थीहरू, अन्वेषकहरू इत्यादिबाट, स्नातक थेसिस, मास्टरको थेसिस, डक्टरेटल थेसिस सहित शैक्षिक कागजातहरूको जापानी प्रूफरीडिंगमा विस्तृत उपलब्धिहरू छन्। हाम्रो जापानी सुधार सेवा शुरू गरेदेखि नै, हामी ठूलो संख्यामा रिपिटरग्राहकहरूवाट अनुरोधहरु पाइरहेका छौ।
तपाईको अनुरोधको पाठ लामो या छोटो दुवैपाठ स्वागत गरिने छ।
जापानी सुधारको बारेमा
सामान्य तया, सुधार कागजातहरूWordफाइलहरूको रूपमा अनुरोध गरिन्छ, र हामी तिनीहरूलाई Wordफाइलकै रूपमा पनि डेलिभर गर्दछौं। यदि तपाईं अन्य ढाँचामा अनुरोध गर्न चाहानु हुन्छ भने हामीसंग सल्लाहा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
Word फाइलको मामलामा, सुधार गर्दा परिवर्तन ईतिहास रेकर्ड हुन्छ, ताकि तपाईं एक झलकमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि कहाँ र कसरी मूल पाठवाट सुधार गरीयो ।
सुधारको बारेमा, हामीसँग मूल पाठको अधिकतम र उत्तम प्रयोग गर्ने नीति छ। त्यस प्रक्रियामा, हामी व्याकरण त्रुटिहरू मात्र सुधार गर्दैनौं तर अप्राकृतिक अभिव्यक्तिहरू र वाक्यांशहरूलाई स्वदेशी जापानीले लेखेको जस्तो लेख बनाउँदछौं।
अनुरोधकर्ताले हामीलाई सुधार गर्न अनुरोध गरेको तथ्य हाम्रो कम्पनीको गोप्य जानकारी हो, त्यसैले हामी यसलाई तेस्रो पक्षलाई सूचित गर्ने छैनौं।
र, तपाइँले सुधार गर्न चाहानुभएको वाक्यहरूको बारेमा, अवश्य पनि, सुधार गरिए पछीको पाठको प्रतिलिपि अधिकार ग्राहकको हो। त्यसकारण, हामी र हाम्रो कम्पनीका सबै सुधारकर्ताहरू कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार राखीने छैन ।
सुधार शुल्क, बुझ्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि Word फाइलको अक्षरहरूको संख्यामा आधारित गरिएको छ। विस्त्रीत रूपमा 1 अक्षर2एनको दर निर्धारण गरिएको छ ।
हुने हुदा, उदाहरणका लागि, 5000वर्णहरुको वाक्यको मामलामा १०,००० येन (+ उपभोग कर) हुनेछ।
न्यूनतम मूल्य 500वर्णको लागि 1000येन (+ उपभोग कर) हो, त्यसैले 500वर्ण वा कम भए पनि, 1000 येन (+ उपभोग कर) लाग्नेछ।
अर्डर गर्ने तरीका
अर्डर गर्ने तरीका यस प्रकार छ।
1.यदि अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ “अर्डर फाराम” प्रयोग गर्नुहोस्।
2.कृपया माथिको “अर्डर फारम” मा ईमेलमा संलग्न गरेर Word फाईल आदि वाट बनाइएको सुधार गर्न चाहानुभएको कागजात पठाउनुहोस्। त्यस पछि, हामी तपाईंलाई इ-मेल मार्फत अनुमानित रकमको बारेमा सूचित गर्नेछौं।
3.यदि तपाईं अनुमानित रकमसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, कृपया भुक्तानी (बैंक स्थानान्तरण वा क्रेडिट कार्ड भुक्तान) गर्नुहोस्।
4.तपाईंको भुक्तानी पुष्टि भएपछी तपाईंको अनुरोध आधिकारिक रूपमा पूर्ण हुनेछ। डेलिभरी सामान्यतया एक हप्ता लाग्छ, तर यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ वा समय सीमा छ भने, कृपया हामीलाई पहिले नै थाहा दिनुहोस्।
* यदि विश्वविद्यालयको सोधसंस्थानवाट सार्वजनिक खर्चमा भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पछि पनी भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हामीलाई आवश्यक कागजातहरू (अनुमानित रकम, इनभ्वाइस, आदि) को बारे अगाडिनै जानकारी दिनुहोस्।
5.हामी एक समर्पित सुधारकर्ता बाट सुधारहरू गर्नेछौं र पूर्ण भएपछि डेलिभर गर्नेछौं।
* यदि तपाईंको डेलिभरी पछि कुनै प्रश्न वा सरोकार छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
नेपालीमा पनि अर्डर सम्भव छ।
जापानी सुधारको लागि अनुरोधको सम्बन्धमा, इ-मेल एक्सचेन्ज आदि वाट नेपाली बोल्न सक्ने मध्यस्थ कर्ता मार्फत अनुरोध गर्न पनि सम्भव छ। त्यो अवस्थामा, एक सुधार शुल्क + 3000 येन आवश्यक हुनेछ।
यदि तपाईं हामीसँग नेपालीमा सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्！
हामी नेपालीबाट जापानी भाषामा अनुवाद गर्दैनौं।